ကာတွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကာတွန်း	18
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Aug 19, 2015 in Creative Writing | 18 comments
၂၀၁၁ ခုနှစ်လောက်က Paint နဲ့အပျော်ဆွဲဖြစ်တဲ့ ကာတွန်းလေး၂ကွက်ပါ။
ရွာသားတစ်ယောက်က ရွာထဲမှာတင်ပါလား ဆိုတာနဲ့ ရောက်တုန်း၊ကြုံတုန်း တင်ခဲ့ပါရစေ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဟိဟိ။
စိုင်း လေး ကိုရော။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မမဆွိအကြိုက်​ဖြစ်​မယ်​ဆိုတာ မနှစ်​​လောက်​တည်းကသိ​ပေမယ့်​ မတင်​ဖြစ်​တာခမျမတင်​ဖြစ်​တာခမျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အရင်တုန်းက Paint နဲ့ ကာတွန်းတွေ ဆွဲခဲ့ဖူးတယ်။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: Digital pen နဲ့မဟုတ်​ပဲ ​မောက်​စ်​နဲ့မို့ လက်​ရာ​တော့မ​သေသပ်​။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဟုတ်​ပါတယ်​ဦးဘလက်​​ရေ ကိုယ်​တိုင်​ pc နဲ့တင်​တုန်းကရှင်းလင်း​နေ​ပေမယ့်​ ဖုန်းနဲ့ပြန်​ကြည့်​​တော့ ​သေး​နေပါတယ်​။
black chaw says: စာလုံးလေးတွေ ကသေးတော့
ပုံကို နှိတ်လိုက်ရင်လည်း Page က ပျောက်သွားပြီး
မြစပဲရိုး says: မနန်း က အနုပညာ မှာ စွယ်စုံတာ ပါလား။
ကာတွန်း ရော၊ ပန်းချီရော၊ နိုင်ဖို့ ဆိုတာ အတော်ပါရမီ ရှိရမယ်။
ကာတွန်း(၁) က ခိုင်ခင်ဦးပေါ့။
ကာတွန်း(၂) က စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် လား။ (ဇီကလေး အပြောအရ) :-))
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ၁နဲ့၂ က အရီး​ပြောသလို ရည်​ရွယ်​ဆွဲဖြစ်​တာပါ။ရုပ်​ပြ​ရေးသူဖြစ်​ချင်​ခဲ့​ပေမယ့်​
ဘယ်​မှာမှ မသင်​ခဲ့ရလို့ ပရိုဖြစ်​မလာခဲ့ပါဘူး။ဒီကာတွန်း​လေးကလည်း ​မောက်​စ်​နဲ့ဆွဲရတာမို့ မ​ဥေပ်​ပါ။ digital pen တ​ချောင်း​လောက်​ဝယ်​ပြီးမှ webtoon ဆွဲပါဦးမည်​။
Than Lhaing says: To. Date.19.08.2015.
Dear,Sir.The Editor and all the staffs`Myanmar Gazette Journal newpresses….
Whom may I concernce that I am Mr.Than Lhaing from Bago city in Burma while I am In Canada country and the time which I have gruatuated from Saneca college school since 2012 by Bachelor Of Art In English and the same time else on my spare time it is force me writing about maintaining the love by short article in the same this Myanmar gazette in your office newpresses Journal so next my free time I will send my article in your Journal office soon any how by fee or volunteer as it sure,Master,Sir——–Should not worry about.
Mr Lhaing Than from Toronto.
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: Welcome Mr Lhaing Than.
Mike says: .ကွန်ပူတာမှာတောင် စာတွေဖတ်မရလို့ တစ်ပုံချင်းပြန်ဖွင့်ကြည့်မှမြင်ရတယ်
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မဒီယံရွေးလိုက်မိလို့ဦးမိုက်ရေ ဒါတောင်ဘောင်အပြင်ထွက်နေသား
Alinsett @ Maung Thura says: ထိချက်က…. ခပ်စပ်စပ်လေး..
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မန့်​ချက်​က ရှူးရှဲ​လေး :D
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကာတွန်းတစ်ကွက်က အများကြီး စကားပြောနိုင်တယ်
မြန်မာပြည်မှာအမျုိးသမီး တစ်ကွက်ကာတွန်း ဆရာ မရှိသလောက်
ဆက်ကြိုးစားကြည့် ပါလား သမော်ဒီး
ကျနော်ကတော့ ပန်းချီ ရော ကာတွန်း ပါ မဆွဲတတ်
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ​သေ​သေချာချာ ကာတွန်းဆွဲသင်​ခွင့်​ရတဲ့တစ်​​နေ့ကို အသက်​ဘယ်​​လောက်​​ရောက်​​ရောက်​အားခဲ​နေမှာပါ​လေး​လေး​ရေ။ကာတွန်းနဲ့ရုပ်​ပြက​တော့ ​ခေတ်​မရှိ​တော့​တောင်​အလွန်​နှစ်​သက်​ပါတယ်​
Ma Ma says: ကာတွန်းက ဆွဲတတ်ရုံနဲ့ မရဘူး။
တော်လိုက်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2394
aye.kk says: ကလေးတွေရဲ့ အသိဥာဏ်ပညာရည်ကို
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေဘို့အတွက်ကာတွန်းပညာနဲ့ ရုပ်ပြဖော်နိုင်တာ